Ny mpiasa Apple dia efa mizaha toetra ny Apple Pay Cash | Vaovao IPhone
Apple Pay Cash dia mikendry ny ho solony amin'ireo mpampiasa mbola tsy mankafy ny Apple Pay Satria tsy mifanaraka ny bankin'izy ireo, noho izany isika dia afaka mankafy mora foana ity rafitra ity izay tsy mbola ampiharina amin'ny firenena toa an'i Espana, izay efa ho roa taona aorian'ny fametrahana azy dia mbola miandry ny fahatongavan'ny Caixa Bank sy N26, ohatra.
Na izany aza, araka ny fantatrao tsara, ao amin'ny iPhone News dia efa mitsapa ny iOS 11.1 isika amin'ny beta voalohany, ary manantena mafy izahay fa ho tonga eo anelanelan'ny anio sy rahampitso ny beta faharoa an'ny iOS 11.1. Saingy misy fiasa izay ny mpiasa Apple ihany no afaka mankafy amin'ny iOS 11.1, ny fampiasana Apple Pay Cash ihany.
Araka ny fantatrao tsara, Apple Pay Cash dia ho karatra Apple virtoaly ahafahantsika mitahiry ny volantsika na mamerina azy io indray, saingy hanana vola lany izy io, afaka maimaimpoana amin'ny carte de debit sy amin'ny taha 3% raha manao recharge na fifanakalozana amin'ny alàlan'ny carte de crédit isika. Izay no fomba MacRumors Nifandray tamin'i Chuck S. izy, mpiasa ao amin'ny Apple izay manandrana ny iOS 11.1 amin'ny fitaovana fitsapana Apple ary manamafy fa Apple Pay Cash dia iray amin'ireo lahasa andrana indrindra amin'izy ireo mandritra ireo herinandro ireo.
Mandritra izany fotoana izany dia manohy manararaotra ny iOS 11.1 izay manolotra valiny mahomby amin'ny bateria izahay, ary koa maro na amin'ny keyboard na amin'ny fampiharana style Note. Apple dia mbola manana asa be atao amin'ny iOS 11 izay miteraka resabe.
Manohy ny lohahevitra, ny vola Apple Pay dia hampifangaroina tanteraka amin'ny rindranasa iPhone Messages, ahoana no fomba hafa. Amin'izay mba, Azontsika atao ny mieritreritra fa herinandro vitsivitsy vao manomboka ny Apple Pay Cash ny fametrahana azy ... ho tonga any Espana koa ve izy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny mpiasan'ny Apple dia efa mizaha toetra ny Apple Pay Cash
Amin'ity indray mitoraka ity, Microsoft Edge dia ho tonga amin'ny iOS alohan'ny faran'ny taona